Ogaden News Agency (ONA) – Daawo Qunsuulka Ethiopia iyo Jawaasiis la caydhsanayo magaalada Oslo Norwey
Daawo Qunsuulka Ethiopia iyo Jawaasiis la caydhsanayo magaalada Oslo Norwey
Safiirka gumeysiga Ethiopia u fadhiya wadamada Scandenevianka ayaa damcay innuu shir ku qabto magaalada Oslo ee wadanka Norwey, halkaas ayaa waxaa shirkii isasoo xaadiriyay 300 oo kamid ah shacabka muslimiinta ah ee kasoo jeeda shucuubta Woyanuhu guumeysto.
Markii shirkii loosoo fadhiistay ayaa waxaa madashii shirka lawareegay dad mudaharaadaya oo ku dhawaaqaya Takbiirta “Allaahu Akbur” iyo ereyo ka dhan ah gumeysiga Ethiopia. Dadkan oo aad u cadheysan ayaa waxaa laga cabsaday inay dhaawac gaadhsiiyaan shaqalaha gumeysiga ethiopia iyo safiirkooda waxaana markiiba meesha iska soo xaadiriyay Police ka wadanka Norwey.
Polisku waxa uu markiiba iskudayay innuu madasha amnigeeda sugo isaga oo talaabadi kowaad ka dhigay sidii uu 300 ee mudaharadaysa uga saari lahaa madasha shirka, islamarkaasna safiirka iyo qunsulka ethiopia iyo inta taageersani ay shirka ugu hadhi lahaayeen.
Poliska iyo dadkii mudaharadayay ayaa arrintaas ku heshiin waayay waxaana sii korodhay xamaasadi dadkii mudaharaadayay iyada oo ay gaadhay in Poliski iyo shacabki sida nabad galyada ah ku mudaharadayay isafgaran waa dhexmaray. Poliska ayaa ka cabsaday dadka mudaharadaya in ay rabshado dhexdooda kala gaadho.
Poliskii ayaa markiiba si dagdag ah uga saaray jaajusiinti gumeysiga u adeegaysay iyo safiirki iyo cidii uu watay madashi shirka iyo aaggaas oo dhan waxaana loola cararay safiirka goob lagu suggo amaankiisa. Shacabkii mudaharadayay ayaa iyana daba orday safiir ku sheegi oo sii baacsaday.
Nin kamid dadka mudaharadaya ayaa sheegay u jeedada ugu weyn ee mudaharadkan innuu ahaa in waxba uga qabsoon gumeysiga Ethiopia wadankan. Meelkasta oo ay damcaan inay ku shiraana waan ka daba tagayna.
Poliska oo dajinaya shacabkan mudaharadaya ayaa u xaqiijiyay in shir danbe loo ogoleyn gumeysiga Ethiopia sidaas awgeed inaysan wax rashbado ah aysan sameyn. Iyaga oo loo sheegay inay xaq u leeyihiin inay mudaharadaan. Poliski iyo shacabkii mudaharadayay ayaa madashii shirka kuwada sheekeystay oo isaga waramay dhibaatada gumeysiga Ethiopia ku hayo shucuubta Muslimiinta ah iyo guud ahaanba dadka ay gumeystaan.
Madashan shirka oo Dowlada Ethiopia lacag badan ku bixisay, halkaas oo cunnooyin badan iyo cabitaano la keenay ayaa waxa uu isu badalay shirkii shir mucaaradka Ethiopia.
Gumeysiga Ethiopia ayaa marar badan laga qabsaday goobo ay ku shirayeen waxaana taagtigadan laga bartay Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka Sweden oo markii u horeysay ku guulaysatay in ay la wareegaan goobaha ay gumeysiga Ethiopia shirarka ku qabsadaan.
Mid kan lamid ah waxaa Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK kalawareegeen jaamacada imperial college oo shir ay rabeen in ku qabsadaan. Waxaa xasuus lama illaawaan ah iyana Jaaliyada Ogadeniya ee Melbourn oo sidaas oo kale sameysay.
Dadkii mudaharadayay ayaa dhahay laba guul ayay noo tahay, Woyanihi oo aan ceydhsanay oo la fashiliyay. Iyo guri bilaash ah oo aaan ku shirno cabitaano iyo cunno bilaash ah, Daggaalkan aan ku guuleysanay waa guul Eebe noogu gargaaray.